Khayre oo booqdey ciidamo ay weerar ku dhaawacday Al-Shabaab
By Xafiiska Ra'iisul Wasaaraha
MUQDISHO, Soomaaliya - Ra’iisul Wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre ayaa Isbitaalka xoogga ku booqday askar ka tirsan xoogga dalka oo ku dhaawacmay deegaanka Ceel-saliini ee gobalka Shabeellada Hoose, iyaga oo argagaxisada ka difaacaya dhiiga iyo hantida ummadda Soomaaliyeed.
Dadka dhintay ayaa la sheegay inay u badan yihiin rayid shacab ah oo huteelkaas ku sugnaa iyo kuwo jidka marayey.
Khayre oo sagootiyey ciidamo loo diyaariyey guluf ka dhan ah Shabaab
War Saxaafaded 26.01.2020. 15:30
Puntland 04.05.2019. 01:18
Ismiidaamin lagu weeraray maqaayad ku dhow Villa Soomaaliya
Soomaliya 09.09.2020. 17:55
Muddo kororsi loo dalbay ra'iisul wasaare Rooble oo la diidey 23.09.2020. 20:20
Puntland iyo Koonfur Galbeed oo wadahadalo uga furmayo Baydhabo 23.09.2020. 17:15
Karaash oo la kulmay sarkaal sarre kana socday Hay'adda Laanqayrta Cas 23.09.2020. 16:30
Farmaajo oo daaha ka rogay tilmaamaha uu kusoo xushay Rooble 23.09.2020. 15:35
Rooble oo soo bandhigay qodobada uu ahmiyada koowaad siinayo 23.09.2020. 12:35
Ra'iisul Wasaare Rooble oo helay Kalsoonida Baarlamaanka 23.09.2020. 12:35